कहाँ पाइन्छ कालो स्याउ ? | NepalDut
कहाँ पाइन्छ कालो स्याउ ?
अंगुर हरियो पनि हुन्छ र कालो पनि हुन्छ । तर कहिल्यै तपाइँले कालो स्याउ देख्नुभएको छ ? हामी सबैले रातो स्याउ त खाएका छाैं तर कालो स्याउको बारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
वास्तवमा कालो स्याउ पूरै कालो नभई गाढा बैजनी रङको हुन्छ । पहिलोपटक हेर्ने मानिसले भने यसलाई कालो नै देख्छन् । यस किसिमको स्याउ निकै दुर्लभ हुन्छ र निकै कम मात्र पाइन्छ । यसलाई ब्ल्याक डाइमण्ड भनिन्छ ।
भुटानको पहाडमा पाइने यो फललाई स्थानीय भाषामा हुआ नियु’ भनिन्छ । चिनियाँ कम्पनी दडोंग टिआलुओले शेङनेङ ई–कमर्स ट्रेडले ५० हेक्टरको जमिनमा यसको खेती गर्दै आएको छ ।